Home Wararka Farmaajo oo si farsameysan u fashiliyay safarkii Sacuudiga ee DG iyo RW...
Farmaajo oo si farsameysan u fashiliyay safarkii Sacuudiga ee DG iyo RW Rooble
Iyada oo maalmihii u danbeeysay la isla dhex maraayay warar sheegaya in dowlada Sacuudiga martiqaaday madaxda Dowlad Goboleedyada iyo RW Rooble ayaa waxaa muuqata in uu safarkaa ku yimid fashil.
Safarka oo la sheegay in ay qaban-qaabadiisa lahayd dowlada Masar oo u soo martay RW Rooble ayaa qaar kamida madaxda Dowlad Goboleedyada ka cudur daarteen in ay halkaas u safraan.
Madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday Farmaajo ayaa ku qanciyay qaar kamida madaxda Dowlad Goboleedyada in ay ku gacan Seeraar oo ay ka baaqdaan safarkaas.
Sida MOl loo xaqiijiyay labo kamida Dowlad Goboleedyada ayaa ka cudur daaran doono in ay qayb ka noqdaan safarkaas. Hadaba hadii safarkaas ay ka maqnaadaan qaar kamida Dowlad Goboleedyada ma laga gaari doonaa yoolkii laga lahaa.
RW Rooble ayaa caawa ku Mashquulsan in uu dib ugu qanciyo madaxda Dowlad Goboleedyada ee ka biyo diiday in safarkaas laga wada qaybgalo. Waxa uu u sheegay madaxda Dowlad Goboleedyada in lacag laga soo siin doono halkaas hadii ay tagaan, laakiin ilaa iyo hada ma cada in lacag laga soo qaadi doono dalka Sacuudiga. Waxa kale oo cadayn ujeedada laga leeyahay safarkaas.
Farmaajo ayaa markale ku guulaystay in uu isbaaro u dhibto qorshaha Rooble, Axmad Madoobe iyo Saciid Deni.